Akon’ny rivodoza AVA : Voa mafy i Toamasina, 3 namoy ny ainy -
AccueilRaharaham-pirenenaAkon’ny rivodoza AVA : Voa mafy i Toamasina, 3 namoy ny ainy
06/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Omaly antoandro, tokony ho tamin’ny 1ora no niditra an-tanety, tany amin’ny distrikan’i Toamasina ilay rivodoza mahery vaika AVA. Tamin’ny 5ora hariva teo, dia mbola tao amin’ny distrikan’i Toamasina no misy azy ary miha matanjaka ny heriny. Tafiakatra 150km isan’ora ny rivotra entiny tao anatin’ny 37km manodidina ny ivony, ary arahina tafiotra 205km isan’ora. Miakandrefana ny lalany, ka rahampitso hariva no vinavinaina hivoaka an’i Madagasikara ny rivodoza AVA, any amin’ny distrikan’i Nosy varika, faritra Vatovavy Fitovinany. Araka ny vaovao farany navoakan’ny sampana mpamantatra ny toetra ny andro, dia niova toa izao ny filazana loza. Loza mitatao ny faritra Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro ary Vatovavy Fitovinany. Loza manambana kosa ny distrikan’ Antalaha, Mandritsara, Andilamena, Tsaratanàna, Anjozorobe, Manjakandriana, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Ambohidratrimo, Andramasina, Arivonimamo, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I-II, Fandriana, Ambositra, Manandriana, Ambohimahasoa, Isandra, Vohibato, Lalangina, Fianarantsoa Ville, Ambalavao, Faritra Atsimo Atsinanana, Ivohibe ary Iakora. Filazana loza fanairana indray ho an’ny faritra Anosy sy Androy. Entanina mba tsy hiandriaka mandrapahalasan’ny loza kosa ireo mpampiasa ny ranomasina amin’ny morontsiraka Atsinanana manontolo. Mampitandrina ihany koa ireo mpanjono any amin’ny morontsiraka Avaratra andrefan’ny Nosy fa hihamafy ny rivotra izay nanomboka omaly alina.
An-jatony ireo traboina
Toa ireo rivodoza nifanesy nandalo teto Madagasikara, dia tsy namela nahazo ihany koa ny rivodoza AVA. Araka ny vaovao voaray, dia olona telo no namoy nandritra ny fandalovan’i AVA. Roa amin’izany no maty an-drano, iray tany Ampasimbe fa iray hafa kosa tany amin’ny kaominina Mahatsara, distrikan’i Brickaville, ary mbola tsy hita popoka ny fatiny. Iray fahatelo indray, tany amin’ny distrikan’i Mampikony, tovolahy 27 taona. Fantatra koa fa efa an-jatony ireo olona traboina. Ho an’ny distrikan’i Toamasina izao, dia mbola sarotra ny manombana ny fahasimbana saingy voalaza fa miisa 175 ny isan’ireo olona traboina. Potika avokoa ny 90 isan-jaton’ny zava-maniry, toraka izany koa ny kazerinan’ ny zandarimariam-pirenena. Ho an’ny eto an-drenivohitra kosa, dia fianakaviana 75 no traboina. Dibo-drano avokoa ireo toerana iva, ka isan’ny mitondra takaitran’izany, ny faritra Atsinanana, Alaotra Mangoro, Analamanga, Vatovavy Fitovinany. Mbola akon’ny rivodoza AVA tany Toamasina hatrany, dia fantatra fa tanàna maro no mitoka-monina sahady noho ny fahatapahan’ny lalana. Tsy misy ihany koa ny taksiborosy miakatra an-drenivohitra ho an’ny andron’ny omaly, vokatry ny fahatapahan’ny lalam-pirenena RN2. Fa ny tena goavana, dia ahiana hiakatra ny vidin’ny entana any Toamasina satria efa tsy misy entana intsony. Mahakasika ny fahatapahan’ny lalana izay hatrany, dia atahorana ny mety hahatapahan’ny lalam-pirenena RN6, singanina manokana amin’izany eo Antanetilava, noho ny, fiakaran’ny rano. Ho an’ity farany, dia entanina ny mponina eto Antananarivo manoloana ny mety ho fiakaran’ny rano. Omaly tamin’ny 6ora hariva, filazana loza manambana ny lemak’Antananarivo. Anisan’izany ny Lemak’Ikopa, Lemak’i Sisaony ary Lemak’i Mamba.
Miverina mianatra amin’ny Alatsinainy
Manoloana ny toetr’andro izay miharatsy hatrany dia nanapa-kevitra ny teo anivon’ny DREN Analamanga fa miato ny fampianarana ho an’ny sekoly rehetra na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana ho an’ny faritra Analamanga omaly 5 janoary. Raha ny tsikaritra omaly izay hatrany, dia mbola betsaka ireo sekoly nanokatra ny varavarany noho ny fahataran’ny famoahan’ny DREN ny fampilazana. Raha tsy misy kosa ny mety fiovaovan’ny toe-draharaha dia amin’ny alatsinainy izao no voalaza fa hiverina an-tsekoly ireo mpianatra.
Na dia eo aza anefa izany, dia entanina ihany ny tsirairay amin’ny fanarahana tsy tapaka ny fampitam-baovao, araka ny fanambaran’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Fantatra ihany koa fa, najoro eo anivon’ity minisitera ity ny « Cellule de crise » iraisan’ny sampandraharaha maromaro ao anatin’io minisitera io hanangonana ireo vaovao mahakasika ny fivoarana sy ny fiantraikan’ny rivodoza AVA, ka ahafahana manafaingana ny fandraisana fepetra , na fanapahan-kevitra.
Toe-javatra tena nisongadina tamin’iny fanamarihana ny fetim-pirenena frantsay tamin’ny 14 jolay 2017 tetsy Ivandry iny ny fihetsik’ireo mpanao politika avy nampiady vahoaka teto amintsika, mahay mihavana tsara. Saika voasolo tena tamin’iny avokoa moa ireo antoko ...Tohiny